Mogadishu Journal » 2019 » July » 13
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre, ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug ku qaabilay wafdi ka socda wasaaradda Gaashaandhigga dalka Qatar. Kulanka Ra’iisul Wasaaraha iyo Saraakiisha Wasaaradda...
Mjournal :-Wafdi ka socda dowladda Qatar ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Maamulka Galmudug, iyadoo wafdigan isugu jiraan Saraakiil ciidan iyo Mas’uuliyiin ka socda Wasaaradda Gaashaandhigga Qatar. Wafdigan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyay...
The Special Representative of the Chairperson of the African Union Commission (SRCC) for Somalia, Ambassador Francisco Madeira, strongly condemns the terrorist attack on a hotel in Kismayo, southern Somalia, in which dozens of innocent people were killed and wounded. The SRCC...
Mjournal :-Wasiirka wasaarada xanaanada Xoolaha Somaliland Xassan Maxamed Gaafaadhi ayaa waxaa uu cadeeyey in markab Somaliland xoolo nool ka qaadey afar cisho ka hor uu ku xayiran yahay Dekada Magaalada Jiddah ee dalka Sucuudiga. Somaliland ayaa sheegay in tilaabaddan ay ...
Mjournal :-Xoghayaha guud ee Jimciyadda Qaruumaha ka dhaxeysa, António Guterres, ayaa cambaareeyay weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen Hotel ku yaalla Magaalada Kismaayo. Afhayeenka xoghayaha guud, Stephene Dujarric, ayaa sheegay in Guterres uu canbaareeyey weerarkii lagu dilay...
Hodan Nalayeh, a Somali-Canadian journalist who built a career telling uplifting stories of the Somali community, has died in a hotel attack in Somalia, according to local media. Nalayeh and her husband, Farid Jama Suleiman, were among 10 people killed after gunmen stormed the...
Mjournal :-Kaddib Kulan saacado badan qaatay oo xalay ay Muqdisho ku yeesheen Guddoonka Baarlamaanka Federaalka ee labada Aqal ayaa lagu soo afjaray khilaafkii siyaasadeed ee u dhaxeeyay, kaasoo sabab u noqday inuu hakado wada shaqeyntii labada Gole. Guddoomiyaha Golaha Shacabka...
Madaxweynaha Jubbaland oo faahfaahiyay Khasaaraha ka dhashay Weerarkii Kismaayo
Mjournal :-Madaxweynaha oo Saxaafada la hadlay ayaa ka tacsiyeeyay dadkii ku waxyeeloobay Qaraxii iyo weerarkii Al-Shabaab ku qaadeen Hotelka Madiina isagoona ka warbixiyay sida ay wax u dheceen. Madaxweynahu wuxuu sheegay in 26 qof ay ku dhinteen weerarka halka 56 kalana ay ku...
Somalia’s security forces have ended an overnight attack by the al-Shabaab Islamist militant group on a hotel in the southern port city of Kismayu that killed at least 26, the regional president says. Police earlier stated the death toll was 13. Members of the the al-Qaeda-linked...
Sawirradda Hotelkii xalay la weeraray ee magaalada Kismaayo
Mjournal :-Bur bur Xoog leh ayaa ka muuqda Dhismaha Hoteelka shalay la weeraray ee Kismaayo, kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 26 qof ayna ku dhaawacmeen 56 ruux. Hoteelka ayaa waxaa soo gaaray burbur, Maadaama Iridda hore ee Hoteelka lagu dhuftay gaari laga soo buuxiyay...
Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay Weerarkii ka dhacay Kismaayo
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi u diray qoysaska iyo ehellada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku naf waayey weerarkii ka dhacay magaalada Kismaayo. Madaxweynaha ayaa u rajeeyey dadka dhaawacyadu ay ka soo...
Mjournal :-Xaaladda magaalada Kismaayo ayaa wali cakiran kadib markii Maleeshiyaad hubaysan oo ka tirsan kooxda Al shabab ay shalay galab ay weerar xooggan ay ku qaadeen Hoteel ku yaala magaalada Kismaayo. Masuulyiinta Isbitaalka magaalada Kismaayo ayaa sidoo kale VOA u...